downloads 11 526
Nke a bụ Cessna 206 H1. Nice efegharị. Gbanwetụrụ ụda na dị mma nke ukwuu mmetụta nke ifufe na-agba na wiil. Gụnyere abụọ repaints na otu oghere njikere na-ese.
The Cessna 206, nke mere ka ya mbụ ụgbọ elu na 1965, bụ n'usoro-ọmụmụ nke ndị Cessna 205 nke e kwukwara a ọzọ dị ike engine na a okpukpu abụọ bu ibu ụzọ. Site ná mmalite nke ya mmepụta ọ bụ dị na abụọ nsụgharị: ndị Super Skylane (njem version) na Super Skywagon (mmekọ version).
Mgbe nke ahụ gasịrị ọtụtụ ndozi e mere. Na 1969 ndị Super Skywagon ghọrọ nnọọ na Skywagon na na 1971 ọ gbanwere nke a ịbụ "Stationair". Ya mere, ndị abụọ nsụgharị mere ihe karịrị otu.
Ma ya nso nke otu-engine Cessna hapụrụ mmepụta ke 1985 Cessna 206. Ọ amaliteghachighị ruo mgbe 1994 na abụọ nsụgharị: na Cessna Stationair (206H) Cessna Turbo Stationair na (T206H), nke ikpeazụ ahụ, dị ka aha ya na-egosi, kwadoro site na a turbocharged engine. Ndị a ụgbọelu natara ha certifications na 1998.
E nwekwara nsụgharị remotorisées site American Soloy Aviations Solutions:
The Cessna 206 Soloy Mk1 kwadoro site na a apụta-Royce tobaim / Allison 250-C20S 420 HP na Cessna 206 Soloy Mk2 kwadoro site na a apụta-Royce tobaim 250B17F 450 HP.
Nsụgharị ndị a na-enye ịrịba arụmọrụ uru mgbe nke ukwuu mbenata mkpọtụ, ha na-eji ọtụtụ ọzọ iga na efe n'elu na-arụ ọrụ. (Wikipedia)
Onye edemede: BONNE Roger, GUIDEE Francois Denis, NEHR Gerd R